ku doodo danta horumarinta caafimaadka ee naadiga ciyaaraha
Sharax sifooyinka ugu muhiimsan ee qaabka-bulsheed- deegaan iyo habka naadiyada isboortiga ee kor u qaada caafimaadka (PROSCESS)
ku salaysan waxqabadkooda/mashruuca horumarinta caafimaadka hab PROSCESS ah
aqoonsadaan iskaashiga si ay u dejiyaan mashruucooda horumarinta caafimaadka
Naadiga isboortiga waa goob nololeed oo soo dhaweysa tiro badan oo kaqeybgalayaal ah, da 'kasta. Markaa, waxay awood u leedahay inay horumariso caafimaadka iyo fayo-qabka xubnaheeda. MOOC-dan waxa ay ku siinaysaa waxyaabaha muhiimka ah si aad u dhisto mashruuc kor loogu qaadayo caafimaadka gudaha naadiga ciyaaraha.
Habka waxbarashadu wuxuu ku salaysan yahay layliyo iyo xaalado la taaban karo, si loo dabaqo qaybaha aragtida. Waxa lagu kabo marag-furka naadiyada ciyaaraha, daraasado kiis iyo qalab, iyo sidoo kale is waydaarsi dhex mara ka qaybgalayaasha.
HABKA: Horumarinta Caafimaadka ee Naadiyada Isboortiga Diisambar 18, 2021Tranquillus
horeTaariikhda (-yada) Belgium